GỤỌ NKE Albanian Amharic Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malayalam Myanmar Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu
“Iwe jide m, m na-achọ onye m ga-akọsara otú ọ dị m n’obi. Mgbe obi na-adịghị m mma, m na-achọ onye ga-akasi m obi. Mgbe obi dị m ụtọ, m na-achọ onye mụ na ya ga-eso ṅụrịa. A sị m kwuo, inwe ndị enyi dị ezigbo mkpa.”—Brittany.
E KWUOLA na ụmụntakịrị chọrọ ndị ha na ha ga na-egwuri egwu, ebe ndị na-eto eto chọrọ ndị enyi. Gịnị dị iche na ha abụọ?
Onye gị na ya na-egwuri egwu bụ onye na-anọnyere gị.
Baịbụl kwukwara na “ezi enyi nwere ịhụnanya mgbe niile, ọ bụkwa nwanne a mụrụ maka oge nsogbu.” (Ilu 17:17) Ihe a e kwuru ebe a karịrị ụdị ndị enyi i ga-enweta n’ebe a na-egwuri egwu!
Eziokwu: Ka ị na-etokwu, ọ dị mkpa na ị ga-enwe ndị enyi
(1) Nwere àgwà ndị dị mma.
(2) Na-ebi ụdị ndụ Baịbụl kwadoro.
(3) Ga-enyere gị aka ịkpa àgwà ọma.
Ajụjụ: Olee otú ị ga-esi mara ma ndị enyi gị hà na-eme ihe ndị a e kwuru? Ka anyị lebara ha anya otu otu.
Ihe Mbụ E Ji Ama Ezigbo Enyi Àgwà Ọma
Ihe i kwesịrị ịma. Ọ bụghị onye ọ bụla kwuru na ọ bụ enyi gị ga-abụli ezigbo enyi. Baịbụl kwudịrị na “e nwere ndị enyi na-achọkarị ịkụrisị ibe ha.” (Ilu 18:24) I nwere ike iche na o siri ike ịhụ enyi ga-eme ụdị ihe a. Ma chegodị nke a: Ò nwetụla onye sị na ya bụ enyi gị ma ya aghọọ gị aghụghọ? Ò nwetụla nke ji gị gbaa asịrị ma ọ bụ kọọrọ ndị ọzọ ihe ị na-emeghị? Ihe ndị dị otú ahụ nwere ike ime ka ị gharazie ịtụkwasị onye ọ bụla sị na ọ bụ enyi gị obi. * Ma cheta na inwe ezigbo ndị enyi ka mma karịa inwe ọtụtụ ndị enyi!
Ihe i nwere ike ime. Họrọ ndị enyi àgwà ha dị mma mmụta.
“Onye ọ bụla na-ekwu okwu ọma banyere enyi m bụ́ Fiona. Achọkwara m ka ndị mmadụ na-ekwu okwu ọma banyere m. Achọrọ m ịdị ka ya. Otú ahụ e si ekwu okwu ọma banyere ya na-atọ m ụtọ.”—Yvette, ọ dị afọ 17.
2. Jụọ onwe gị, sị, ‘Ndị enyi m, hà na-akpa àgwà ndị so ná “mkpụrụ nke mmụọ nsọ”?’
3. Depụta aha ndị enyi gị gị na ha kacha akpachi anya n’okpuru ebe a. I dee aha onye nke ọ bụla, i dee àgwà i ji mara ya.
Ihe Ga-enyere Gị Aka: Ọ bụrụ naanị àgwà ọjọọ onye ahụ ka ị na-echeta, mara na o nwere ike ịdị mkpa ka ị chọwa ndị enyi ka mma!
Ihe nke Abụọ E Ji Ama Ezigbo Enyi—Ụdị Ndụ Baịbụl Kwadoro
Ihe i kwesịrị ịma. Ọ bụrụ na ọ dị gị ọkụ n’ahụ́ inweta ndị enyi, o yikarịrị ka i ga-enweta ndị enyi ọjọọ. Baịbụl kwuru, sị: “Ihe agaghị agaziri onye ya na ndị nzuzu na-emekọ ihe.” (Ilu 13:20) Okwu ahụ bụ́ “ndị nzuzu” adịghị ekwu maka ndị na-amaghị ihe. Ihe ọ na-ekwu bụ maka ndị na-adịghị achọ igere ndụmọdụ dị mma, kama ya, ha ana-ebi ndụ ọjọọ. Ọ bụ ụdị ndị enyi ahụ ka ị na-ekwesịghị inwe!
Ihe i nwere ike ime. Kama imete onye ọ bụla ị hụrụ enyi, na-ahọ ndị ga-abụ enyi gị ahọ. (Abụ Ọma 26:4) Nke a apụtaghị na ị ga-akpọ ndị mmadụ asị. Ya bụrụ na ị na-ahọ ndị enyi ahọ, ihe ọ pụtara bụ na i nwere ike ịhụ “ihe dị iche n’etiti onye ezi omume na onye ajọ omume, n’etiti onye na-ejere Chineke ozi na onye na-adịghị ejere ya ozi.”—Malakaị 3:18.
Chineke adịghị ele mmadụ anya n’ihu, ma ọ na-ahọ ndị ‘ga-abụ ọbịa n’ụlọikwuu ya’ ahọ. (Abụ Ọma 15:1-5) I nwekwara ike ime otu ihe ahụ. Ọ bụrụ na i na-ebi ndụ otú Chineke chọrọ, o yiri nnọọ ka ndị na-agbalịkwa ibi ndụ otú ahụ ga-achọ ka gị na ha bụrụ enyi. Ha ga-emecha bụrụ ụdị ndị enyi kacha mma i nwere!
“Obi dị m ụtọ na ndị mụrụ m nyeere m aka ịchọta ndị enyi na-ebi ndụ otú Chineke chọrọ, ndị bụ́kwa ndị ọgbọ m.”—Christopher, ọ dị afọ 13.
▪ Mụ na ndị enyi m nọrọ, ọ̀ na-adịkarị m ka hà nwere ike ịranye m ime ihe m maara na ọ dị njọ?
▪ Ọ̀ na-esiri m ike igosi ndị mụrụ m ndị enyi m n’ihi na ụjọ na-atụ m na ndị mụrụ m nwere ike ịgwa m ka mụ na ha kwụsị ịkpa?
Ihe Ga-enyere Gị Aka: Ọ bụrụ na ị zara ee n’ajụjụ abụọ ahụ, mara na ị ga-achọwa ndị enyi àgwà ha ka mma. Ọ̀ gaghị adị mma ma ibu ụzọ meta ndị tọtụrụ gị enyi, bụ́ ndị na-akpa ezigbo àgwà e ji mara Ndị Kraịst?
Ihe nke Atọ E Ji Ama Ezigbo Enyi—Inyere Gị Aka Ịkpa Àgwà Ọma
Ihe i kwesịrị ịma. Baịbụl kwuru, sị: “Mkpakọrịta ọjọọ na-emebi àgwà ọma.” (1 Ndị Kọrịnt 15:33) Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Lauren sịrị: “Naanị mgbe ụmụ akwụkwọ ibe m na-ekwe ka mụ na ha dịrị ná mma bụ mgbe m mere ihe ha gwara m mee. Enweghị m enyi, n’ihi ya amalitere m ịkpa àgwà ka ha naanị ka mụ na ha bụrụ enyi.” Lauren chọpụtara na ọ bụrụ na mmadụ ana-akpa àgwà otú ndị ọzọ chọrọ ka ọ na-akpa, onye ahụ ga-adị ka oche a na-akwagharị akwagharị nke ndị na-akpụ isi ji akpụ isi, ha ga na-akwagharị onye ahụ ebe ọ bụla ha chọrọ. Ị karịala onye a ga-eme ụdị ihe a!
Ihe i nwere ike ime. Gị na ndị na-achọkarị ka ị gbanwee àgwà gị ma kpawa àgwà ka ha kwụsị ịkpa. Ọ bụrụ na i mee nke a, obi ga-adịkwu gị ụtọ, nke ahụ ga-emekwa ka i nwekwuo ohere imete ezigbo ndị enyi, ya bụ, ụdị ndị enyi ga-enyere gị aka ịkpa àgwà ọma.—Ndị Rom 12:2.
“Ezigbo enyi m bụ́ Clint bụ nwa okoro isi jụrụ oyi na onye na-aghọta otú ọ dị ndị ọzọ, ọ bụ nnọọ onye na-agba m ume.”—Jason, ọ dị afọ 21.
▪ M̀ na-agbanwe ụdị uwe ndị m na-eyi, otú m si ekwu okwu, ma ọ bụ otú m si akpa àgwà iji mee ka obi dị ndị enyi m mma?
▪ M̀ na-aga ebe ndị m nwere ike ịnọ mụta àgwà ọjọọ, bụ́kwanụ ebe m na-agaghị achọ ịga ma e wezụga na ndị enyi m na-aga ya?
Ihe Ga-enyere Gị Aka: Ọ bụrụ na ị zara ee n’ajụjụ abụọ a, gakwuru ndị mụrụ gị ma ọ bụ onye ọzọ toro eto ka ha gwa gị ihe ị ga-eme. Ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime Ndịàmà Jehova, i nwere ike ịgakwuru otu okenye ọgbakọ ma gwa ya ka o nyere gị aka ịhọrọ ndị enyi ga-eme ka ị na-akpa ezi àgwà.
Ị gaa n’Ịntanet, ị ga-enweta ihe ndị ọzọ a tụlerela n’isiokwu bụ́ “Ndị Na-eto Eto Na-ajụ, Sị” n’adres bụ́ www.watchtower.org/ype
^ par. 14 N’eziokwu, ọ dịghị onye na-adịghị emehie. (Ndị Rom 3:23) N’ihi ya, ọ bụrụ na enyi gị emee gị ihe wutere gị ma mechaa gosi na o wutere ya, cheta na “ịhụnanya na-ekpuchi ọtụtụ mmehie.”—1 Pita 4:8.
▪ Olee àgwà ndị kacha amasị gị ị ga-achọ ka enyi gị nwee, gịnịkwa mere ị ga-eji chọọ ka o nwee ya?
▪ Olee àgwà ndị ọ dị mkpa ka i nwee iji bụrụ ezigbo enyi?
“Mgbe ndị mụrụ m gwara m ka m kwụsị iso ụdị ndị enyi mụ na ha na-esobu, ihe m kwuru n’obi m bụ na ọ bụ naanị ha ka mụ na ha nwere ike ịkpa. Ma ndụmọdụ ahụ ndị mụrụ m nyere m dị mma n’ihi na mgbe anya mechara mepee m, abịara m chọpụta na ezigbo ndị enyi juru eju.”—Cole.
“Ikwusa ozi ọma bụ ụzọ kasị mma m si amata ndị mụ na ha nọ n’ọgbakọ. Ọ bụ n’ozi ọma ka m si amata ma ndị na-eto eto ma ndị agadi. Mụ na ndị hụrụ Jehova n’anya na-anọkwa mgbe niile.”—Yvette.
“Ekpere m ekpere ka m nweta ndị enyi ma mechaa chọpụta na ọ dịghị ihe m na-eme iji chọta ha. N’ihi ya, amalitere m ibu ụzọ akpanyere ndị ọzọ ụka mgbe m bịara ọmụmụ ihe Ndị Kraịst. Ọ dịghị anya mụ enwee ọtụtụ ndị enyi ọhụrụ. Ugbu a, anaghị m anọkarịzi naanị m.”—Sam.
Jụọ ndị mụrụ gị otú e si enweta ezigbo ndị enyi. Jụọ ha ụdị ndị enyi ha nwere mgbe ha hà ka gị. Ò nwere ihe ọ na-abụ ha cheta banyere ndị ha họọrọ ịbụ enyi ha ya ana-ewute ha? Ọ bụrụ na o nwere, gịnị kpatara ya? Jụọ ha otú ị ga-esi zere ụfọdụ n’ime nsogbu ndị ha dabara na ya.
Mee ka ndị mụrụ gị mata ndị enyi gị. Ọ bụrụ na ọ na-esiri gị ike ime nke a, jụọ onwe gị sị, ‘Gịnị mere o ji esiri m ike?’ È nwere ihe ụfọdụ ndị enyi gị na-eme ị maara na ndị mụrụ gị agaghị anabata? Ọ bụrụ na e nwere, mara na ọ dị mkpa ka i lezikwuo anya n’ụdị ndị enyi ị na-ahọrọ.
IHE ATỌ GA-ENYERE GỊ AKA INWE EZIGBO NDỊ ENYI
▪ Na-ege ntị nke ọma. Gosi na i bu ọdịmma ndị enyi gị n’uche.—Ndị Filipaị 2:4.
▪ Na-agbaghara. Atụla anya na ha ga na-emetecha ihe niile. “Anyị niile na-asụ ngọngọ ọtụtụ ugboro.”—Jems 3:2.
▪ Na-enyetụ ha ohere. Ọ dịghị mkpa ka gị na ndị enyi gị na-anọ mgbe niile. Ezigbo ndị enyi na-anọ ya mgbe ọ bụla ị chọrọ ha.—Ekliziastis 4:9, 10.
Ọ bụrụ na ị na-akpa àgwà otú ndị ọzọ chọrọ ka ị na-akpa, naanị ka gị na ha dịrị ná mma, ị ga-adị ka oche a na-akwagharị akwagharị nke ndị na-akpụ isi ji akpụ isi, ha ga na-akwagharị gị ebe ọ bụla ha chọrọ
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ M̀ Kwesịrị Inwe Ezigbo Ndị Enyi?